Unicef Yokurudzira Vechidiki Kurwisa Kushanduka kweMamiriro eKunze
MATABELELAND NORTH —
Sangano reUnicef rinoti vechidiki vanofanirwa kuva pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze senzira yekuchengetedza remangwana ravo rakanaka.
Mukuru weUnited Nations Children’s Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe, Doctor Tajudeen Oyewale, vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze.
Muhurukuro yavakaita neStudio7 mushure mekushanyira chikoro cheInyathi High School nezuro, Dr Tajudeen Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshiwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Asi Dr Oyewale vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo variwo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Dr Oyewale vakashanyira nezuro chikoro cheInyathi kuti vasangane naNkosilathi Nyathi mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUnicef kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera.
Nyathi uyo ane makore gumi nemasere, ari muForm 5, uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake.
Nyathi akaudza Studio7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti idambudziko raaiona mukurarama kwake munharaunda.
Muna 2016 Nyathi akawana mubairo wechuru chemadhora ekuAmerica muchirongwa chaitungamirwa neUnicef akakwanisa kuvaka nzvimbo inokwanisa kushandura tsvina yakasiyana siyana kusanganisira chikafu chinoraswa, kuti iite mhando wemoto unokwanisa kushandiswa pakubika, kana kuti biogas digester.
Kunyange hazvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kubidirira muAfrica dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti ichishandiswa mumabasa akasiyana siyana nderimwe dambudziko guru munyika.
Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekita emiti anopfuura mazana matatu nemakumim matatu ezviuru (330 000 hectares) gore rega rega uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvaivepo mugore ra2014.
Nyathi anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Nyathi akawana mukana wekuenda kumusangano weConference of Parties kuSpain muna 2019 uye muna Gunyana wegore rino akaenda kune mumwe musangano wevechidiki wakaitwa kuItaly.
Dr Oyewale vanoti zviri kuitwa naNyathi zvakakosha zvikuru nekuti zviri kubatsira kuti inzwi revechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Mutevedzeri wemukuru paInyathi High School, VaFrank Phiri, vanorumbidzawo Nyathi nekuda kwebasa raari kuita. VaPhiri vanoti zvisinei nemukurumbira waave nawo Nyathi anoramba ari mwana ane tsika uye akadzikama.
Pamusangano weCOP26 wakapera muScotland svondo rapera, pakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.